लालबाबु पण्डितलाई दिलनिशानी मगरको खुलापत्र | Sawal Nepal |The Power of Information
Posted By: सवाल नेपालon: २०७६ श्रावण ५, आईतवार १२:३४ मा प्रकासित Tags: No Comments
तपार्इंको पुत्ला दहन गरिरहेका आन्दोनकारीहरूले निधारमा झण्डाको फेटा बाँधेका थिए । ती प्रायः सबै युवा थिए । तिनको अनुहारमा केही अभाव र आक्रोशको झल्को प्रस्ट देखिन्थ्यो । तिनीहरू नारा लगाउँदैथिए– नश्लवादी दमन बन्द गर, लोकसेवा आयोगको नयाँ भर्ना खारेज गर, संविधानको रक्षा गर, समावेशी अधिकार देऊ यस्तै यस्तै । र यस्तो पनि सुनियो कि उनीहरूले तपार्इंको राजीनामाको माग पनि गरिरहेका थिए नारा जुलुसमा । साइकल चलाएर पेट्रोलको पैसा खाने खाने मन्त्री भनेर तिनीहरू हाँसिरहेका थिए । लोकसेवा आयोगको केही समयअघि प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा आरक्षणतर्फको सीट घटेको उनीहरूको तर्क थियो । ठूलो संख्यामा ९९ हजार १६१ सीटका लागि विज्ञापन गरिँदा आरक्षणतर्फ किन थोरै मात्र सीट छुट्ट्याइएको भनेर उनीहरू प्रश्न गरिरहेका थिए ।
अन्तिममा, संविधानको मूल मर्म भनेको समावेशिता हो । संघीयता हो । संघीयता र समावेशिताको मर्म र भावनालाई लोकसेवाको विज्ञापनले बेवास्ता गरेको छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार यसखालको विज्ञापन गर्दा स्थानीय तहले माग गरेअनुसार गर्ने हो, माथिबाट विज्ञापन गर्ने होइन । अथवा माथि सरकारले, मन्त्रालयले तिमीहरूले यो यो माग भनेर निर्देशन जारी गरेर माग्ने होइन । पञ्चायतकालमा शासन सत्तामा वर्चश्व स्थापित गरेका समुदायको हालीमुहालीलाई निरन्तरता दिनका लागि लोकसेवाको परिकल्पना गरिएको थियो । त्यसैअनुरूप कुनै खास वर्ग समुदायलाई पायक पर्ने स्थानमा लोकसेवाका कार्यालयहरू खोलिएका थिए । अब के पञ्चायती शैलीको लोकसेवा ब्युँझाउन खोजेको ? मन्त्रीज्यू, यो के भइरहेको छ ? यो समावेशी नेपाल हो कि पञ्चायती व्यवस्था ? लोकान्तर बाट साभार